Kooxaha Manchester United,Swansea,West Brom,Stoke iyo Newcastle oo Guulo Gaaray “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Kooxda Manchester United ayaa garoonkeeda Old Trafford 2-0 uga badisay kooxda Sunderland.
Garsoorihii ciyaarta Roger East ayaa daqiiqadii 64-aad ee ciyaarta si qalad ah kaarka casaanka ku siiyay ciyaaryahan Wes Brown,waxana qaladka lagu siiyay galay kabtanka kooxda Sunderland John O’Shea.
Ciyaaryahan Wayne Rooney ayaa gool u bedelay rigooradii loo dhigay kooxda Manchester United.
Ciyaaryahan Wayne Rooney ayaa dhamaadkii ciyaarta goolka labaad u dhaliyay kooxda Manchester United.
Kooxda Manchester United ayaa kala horeynta horyaalka ingiriiska uga jirto kaalinta sedaxaad,waxana ay leedahay 50-dhibcood,halka kooxda Sunderland ay horyaalka uga jirto kaalinta 16-aad,iyadoo leh 25-dhibcood.
Kooxda West Bromwich Albion ayaa garoonkeeda the Hawthorns 1-0 uga badisay kooxda Southampton.
Kooxda West Bromwich ayaa goolka la hor martay,waxaana daqiiqadii labaad ee ciyaarta goolka guusha u dhaliyay Saido Berahino,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Labada koxood ayaana wax gool ah iska dhalin qeybtii danbe ee ciyaarta.
Kooxda Southampton ayaa laga badiyay kulankii labaad oo xiriir ah.
Kooxda Southampton ayaa kala horeynta horyaalka ingiriiska uga jirto kaalinta shanaad,waxana ay leedahay 46-dhibcood,halka kooxda West Bromwich ay horyaalka uga jirto kaalinta 13-aad,iyadoo leh 30-dhibcood.
Kooxda Burnley ayaa waxaa garoonkeeda Turf Moore 0-1 uga badiyay kooxda Swansea City.
Kooxda Swansea City ayaa qeybtii danbe ee ciyaarta gool dhalisay,waxaana daqiiqadii 65-aad ee ciyaarta si qalad ah iskaga dhaliyay ciyaaryahan Kieran Trippier.
Kooxda Swansea City ayaa kala horeynta horyaalka ingiriiska uga jirto kaalinta sideedaad,waxana ay leedahay 40-dhibcood,halka kooxda Burnley ay ka mid tahay sedaxda kooxood ee horyaalka ugu hooseeya.
Kooxda Stoke City ayaa garoonkeeda Britannia Stadium 1-0 uga badisay kooxda Hull City.
Ciyaaryahan Peter Crouch ayaa daqiiqadii 72-aad ee ciyaarta goolka guusha u dhaliyay kooxda Stoke City.
Ciyaaryahan Crouch ayaa dhaliyay goolkiisii 46-aad oo uu madaxa ku dhaliyo,isagoo la sinmay ciyaaryahan Alan Shearer oo horey horyaalka ingiriiska uga dhaliyay 46-gool oo uu madaxa ku dhaliyay.
Kooxda Stoke City ayaa kala horeynta horyaalka uga jirto kaalinta tobanaad,waxana ay leedahay 39-dhibcood,halka kooxda Hull City ay horyaalka uga jirto kaalinta 15-aad,iyadoo leh 26-dhibcood.
Kooxda Newcastle United ayaa garoonkeeda St. James’ Park 1-0 uga badisay kooxda Aston Villa.
Ciyaaryahan Jonas Gutierrez oo ka soo kabsaday cudurka kansarka ayaa dib ugu soo laabtay kooxda Newcastle United.
Kooxda Newcastle United ayaa goolka la hor martay,waxaana dhamaadkii qeybtii hore ee ciyaarta goolka guusha u dhaliyay ciyaaryahan Papiss Cisse,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Kooxda Newcastle United ayaa kala horeynta horyaalka ingiriiska uga jirto kaalinta 11-aad,waxana ay leedahay 35-dhibcood,halka kooxda Aston Villa ay ka mid tahay sedaxda kooxood ee horyaalka ugu hooseeya.
Ciidamada Ammaanka Oo Ka Hortagay Weerar Argagaxisada Ay Ku Doonayeen In Ay Ku Dhibaateeyaan Dadka Soomaaliyeed